बैंकिङ पहुँचमा एक दशक : खाता संख्या अधिक, एकै व्यक्तिका दर्जनौं खाता ! - Banking Khabar
बैंकिङ पहुँचमा एक दशक : खाता संख्या अधिक, एकै व्यक्तिका दर्जनौं खाता !
बैंकिङ खबर व्यूरो / नेपालमा एक दशकको अवधिमा बैकिङ पहुँचमा उछाल आएको छ । स्थानीय सरकार आएपछि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति अनुरुप सोही अनुसार नागरिकहरुमा बैंकिङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको हो । आज शहरबजारदेखि गाउँगाउँसम्म बैंकवित्तका शाखा विस्तार भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत पनि वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँचलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६-६७ का अनुसार ४० प्रतिशत घरपरिवार ३० मिनेट भित्र वाणिज्य बैंकमा पुग्न सक्ने स्थिति रहेको थियो । जसमध्ये शहरी क्षेत्रमा ८९ प्रतिशत जनता ३० मिनेट भित्र नजिकको वाणिज्य बैंक शाखामा पुग्न सक्छन्भने ग्रामीण क्षेत्रमा २७ प्रतिशत जनता मात्र यो समयमा नजिकको वाणिज्य बैंक शाखामा पुग्ने स्थिति रहेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।
एक घण्टा भित्र वाणिज्य बैंक पुग्न सक्ने घरपरिवार तराई क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत, पहाडमा ४५ प्रतिशत र हिमालमा १७ प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकमा पुग्न लाग्ने औसत समय शहरी क्षेत्रमा १६ मिनेट र ग्रामीण क्षेत्रमा १३५ मिनेट रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको थियो । तर पछिल्लो समय गाउँमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तारका कारण आम नागरिकलाई सहज बैंकको पहुँचसम्म पुग्न सहज भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६८ फागुन मसान्तमा ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ८८ वटा विकास बैंक, ७८ वटा वित्त कम्पनी र २३ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था गरी जम्मा २२१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेका थियो भने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुको संख्या १३०० पुगेको थियो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको शाखा संख्या समेत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल शाखा संख्या २२६५ पुगेको थियो । यसबाट प्रति शाखाले औसतमा ११७६० जनालाई सेवा प्रदान गरेको थियो ।
तर एक दशवर्षको अवधिमा भने बैंकिङ पहुँचमा उल्लेख्य सुधार भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसारकुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ मंसिरसम्म ७५० तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । २०७७
मंसिरसम्म ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए । यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७८ मंसिर मसान्तमा १२९ रहेको छ । यस मध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९७६५ रहेकोमा २०७८ मंसिर मसान्तमा ११,१८३ पुगेको छ
राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘६७.३४ प्रतिशत नेपालीहरुमा बैंकिङ पहुँच’
नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७.३४ प्रतिशत नेपालीहरुको पहुँचमा बैंक पुगेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको नेपालमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा क’, ख’ र ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा २०७७ जेठ मसान्तमा कायम निक्षेप खाताको विवरणको आधारमा यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
निक्षेप खाता संख्या तीन करोड ६३ लाख ६६ हजार र कर्जा खाता संख्या १६ लाख ८२ हजार ८४५ रहेको छ । २०७७ जेठ मसान्तमा तीन करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता र यसमध्ये नेपाली प्राकृतिक व्यक्तिको दुई करोड ९९ लाख २८ हजार ४३६ निक्षेप खाता रहेका छन् । तीन पुस्ते विवरणको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा २०७७ जेठ मसान्तमा ६७.३४ प्रतिशत नागरिकको कम्तीमा एक निक्षेप खाता रहेको देखिएको छ ।
२०७६ असार मसान्तमा कम्तीमा एक निक्षेप खाता भएका नेपालीको संख्या ६०.९ प्रतिशत रहेको थियो । कुल निक्षेप खातामा प्राकृतिक व्यक्तिको खाताको हिस्सा ९३.४८ प्रतिशत पाइएको छ । प्रतिहजार व्यक्ति ९ सय ९८ खाता रहेकोमा पुरुषको प्रतिहजार व्यक्ति १ हजार ३ सय १४ खाता र महिलाको प्रतिहजार व्यक्ति ६ सय ८७ खाता रहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा प्रतिहजार व्यक्ति १ हजार ८ सय २ र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रतिहजार व्यक्ति ४ सय ५८ खाता रहेका छन् । महानगरमा प्रतिहजार व्यक्ति ३ हजार २ सय ९६ र ग्रामीण नगरपालिकामा प्रतिहजार व्यक्ति २ सय ५१ खाता रहेका छन्। कुल निक्षेप खातामध्ये ६७.७ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेका छन् ।
पुरुषको खाता संख्यामध्ये ६५.२ प्रतिशत र महिलाको खाता संख्यामध्ये ७२.३ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेका छन् । ग्रामीण नगरपालिकामा ८१.५ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेको पाइएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले खोलेका कुल निक्षेप खाता संख्यामा बचत निक्षेप खाताको हिस्सा ९०.६ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप खाताको हिस्सा ३.१ प्रतिशत रहेको छ ।
व्यक्तिगत खातामा ९६.१५ प्रतिशत हिस्सा वयस्क व्यक्ति (पन्ध्र वर्षभन्दा माथि) को रहेको छ । प्रति एक लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने बैंकको शाखा संख्या औसतमा १८.९८ प्रतिशत रहेको छ । उक्त संख्या सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा ३०.२५ र सबैभन्दा कम प्रदेश नं. २ मा ९.७३ प्रतिशत रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति एक लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८.५४ र महानगरपालिकामा ४५.७६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
हाल नेपालमा १७ लाख ६४ हजार लोन एकाउन्ट रहेको छ । डिपोजिट एकाउन्ट ३ करोड ६४ लाख १३ हजार ५ सय ५५ रहेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार नेपालमा १५ देखि २० प्रतिशत दोहोरो खाता रहेको छ ।
महिलाको खाता संख्या बढी
राष्ट्र बैंकका अनुसार कूल निक्षेप खातालाई हेर्दा महिलाको खाता संख्या बढी रहेको छ । कूल निक्षेप खाता संख्यामा ६७.७ प्रतिशत खाता सक्रिय छन् । त्यसमा पुरुषको हिस्सा ६५.२ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा ७२.३ प्रतिशत रहेको छ । कूल निक्षेप खातामध्ये बचत निक्षेप खाता ९०.६ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, मुद्दती निक्षेप खाताको हिस्सा ३१ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रका नगरपालिकामा ८१.५ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेको छ । व्यक्तिगत खातामा ९६.१५ प्रतिशत हिस्सा वयस्क व्यक्तिको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७७ जेठ मसान्तसम्म तीन करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएका छन् । तीनपुस्ते विवरणका आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा २०७७ जेठ मसान्तसम्म कम्तीमा एक निक्षेप खाता भएका नेपालीको संख्या ६०.९ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । प्रतिहजार व्यक्ति ९९८ खाता रहेकामा पुरुषको प्रतिहजार व्यक्ति एक हजार ३१४ खाता र महिलाको प्रतिहजार व्यक्ति ६८७ खाता रहेका छन् । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा प्रतिहजार व्यक्ति एक हजार ८०२ र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रतिहजार व्यक्ति ४५८ खाता छन् । महानगरमा प्रतिहजार व्यक्ति तीन हजार २९६ र ग्रामीण नगरपालिकामा प्रतिहजार व्यक्ति २५१ खाता छन् ।
प्रति एक लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने बैंकका शाखा संख्या औसतमा १८.९८ प्रतिशत रहेको छ । उक्त संख्या सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा ३०.२५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा ९.७३ प्रतिशत छ । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति एक लाख जनसंख्यालाई सेवा पु¥याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८.५४ र महानगरपालिकामा ४५.७६ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी पोखरेल सरकारको ‘खोलौँ बैंक खाता’ अभियानले पनि महिलालाई खाता खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताउँछन् । ‘सोसल बेनिफिटहरू पनि बैंक खाताबाटै रकमान्तर हुने भन्ने पोलिसी सरकारले ल्यायो । यसले बैंक खाता खोल्ने महिलाको संख्या बढेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् ‘वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता सबै किसिमका सामाजिक सुविधाहरू खातामार्फत नै प्रवाह गर्ने हिसाबले खाताको आवश्यकता प¥यो । अर्को तर्फ रेमिट्यान्स रेसिडेन्टहरूले बैंक खाता हुनुपर्छ भन्ने गरेकाले महिलाहरू खाता खोल्न बाध्य हुनुभएको छ ।’
चारैतर्फबाट बैंक खाता हुनुपर्ने अवस्था आएपछि र केही हदसम्म वित्तीय जागरणका कारण पनि खाता खोल्ने महिलाको संख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा समेत नेपाली महिलामा बैंक खाता खोल्नेको संख्या बढेको देखिएको थियो । मानव विकास सूचकांकको ‘वित्तीय संस्थामा महिलाका खाता’ शीर्षकमा समावेश गरिएको सो शीर्षकमा सन् २०११ देखि सन् २०१७ सम्मको तथ्यांकमा नेपाली महिलाले पछिल्लो ६ वर्षमा नै दोब्बर खाता खोलेको पाइएको थियो ।
प्रतिवेदनले महिला क्रमशः वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्दै गएको र त्यो संख्या क्रमशः बढ्दै जाने देखाएको थियो । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्दै गएको, बचत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएका कारण पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने महिलाको संख्यामा वृद्धि भएको हो । सरकारले बजेटमा हरेक नेपालीको एक बैंक खाता अनिवार्य खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । सो कार्यक्रमले समेत महिलाको संख्यामा वृद्धि हुने देखिएको छ ।